Usana Lwasendle Olungaphantsi - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
Usana Lwasendle Olungaphantsi
Imijelo yayo ijikelezwe njengeyethu, ngaphandle kwezimbini ezigungxulwa njengethoyilethi yangasese. Isihlunu esicacileyo sisetyenziselwa ukulungisa intloko nentamo kwaye uhlambulule indlebe. Iminwe kunye neenzwane zineediski ezixwebileyo zefele esiqingqiweyo esiza kubamba imilenze nemithi epholileyo. Isalathisi somnwe sesandla ngasinye siphezulu (sincinci kunamanye iminwe yesandla) ukwenzela ukuququzeleleka kangcono kumasebe amakhulu. I-Mohol, okanye i-South African Lesser Galago ibonakaliswa kubukho bezinyo. Ingubo yolu hlobo i-ingwevu na-brown. Nangona kunjalo, amacandelo kunye neengalo zisoloko zinomdla wokujonga imbala ephuzi. Kukho amanqaku phakathi kwamehlo kunye neendandatho ezimnyama ngeenxa nganye.
Zitya izinambuzane kunye nemigqomo yemithi, ziya kuhlamba umbethe kunye nemvula yamanzi kwimimangxuma kunye namaqhibi.
Ngokuqhelekileyo bazala amawele ngaphambi kwexesha lemvula, elandelwa ngokukhawuleza yi-oestrus yesibini. Phambi kokuqala kwexesha eyomileyo elandelayo isethi yesibini sele sizalwa. Ixesha lokuthobela liyi-125 iintsuku. Ibhinqa liza kutshata kunye nawesithandathu amadoda ngexesha lokuphakama komjikelo wakhe. 'Ipaki yamabhinqa' azo iintsana kwiziti ezakhiweyo ngelixa zifuna ukutya, zibenza bahambe engozini ngokuziphatha emilonyeni yabo. Amadoda aya kumakisha amabhinqa ngokuvota kuwo.
I-Bushbaby encinane, eyaziwa kwizinzululwazi njengeGalago moholi, yinto encinci yokuhlala emzimbeni esebenza ebusuku. Ziyakwazi ukukhupha umgama ophawulekayo phakathi kwemithi. Maxa wambi zinokuthi zizibhuqe emhlabeni, xa zihamba ngeemilenze yazo amantshontsho okanye kuzo zonke ezine. Ngaphandle kwamadoda amadala aphephe ukulwa nenye ngokugcina indawo nganye, inkqubo yazo yentlalo ifana neye-Thick-tailed Bushbaby. Ezindala zixhomekeke zodwa, kodwa izihlobo zidibana ebusuku ukuze zidibane ngaphambi kokulala emini ngamaqela afikelela kwezintandathu.
Le ntlobo inezixhobo eziyi-18 ezahlukeneyo, ezinokuthi zihambelane neendlela zokuziphatha ezichanekileyo. La maqela ama-thathu asebenzayo, ezo ziqhagamshelana nentlalo, zixhaphaza, abakhuselayo, kunye nokuziphatha okuchasayo. Ukuxhomekeka kwazo ekunxibelelweni ngezwi kuyingxenye yesicwangciso sazo sokusinda ekuqaliseni intshaba. Amehlo e-Bushbaby awakwazi ukuhamba kwizisekelo zawo, kwaye ke intloko iqhubeka isebenza xa ifuna ixhoba. Ziye zaphuhlisa ukuva, kunye neendlebe zazo zineenkcukacha eziyinkimbinkimbi zeentlobo, eziyenza zikwazi ukubeka umthombo wesandi ngokuchanekileyo. Kunzima ukuva ukukhwela kwesikhova.
Ukushukuma kwawo kukhawuleza kakhulu, kwaye zinokubamba iinkumbi kunye namaqhubu emoyeni kunye neenyawo zabo zangaphambili, ngelixa zibambelele emthini ngeemilenze yazo ezinqeni. Kwakhona ebusuku, iBushbaby incinci kakhulu malunga nokubonakala kwayo, ukuhlambulula ngononophelo ngaphambi kokuqalisa uhambo lokuhamba ebusuku.
Iindawo ezikhethiweyo ziindawo zokuhlala, iziqithi, umthi womlambo kunye neentambo zehlathi. Ngokukodwa, kufuphi noMlambo waseLimpopo phakathi kweendawo zokudibanisa kunye neMarico ne-Notwani. Ukuba yintlobo yaseMzantsi Afrika, inokunyamezela ngokunyuka kwamaqondo obushushu.
Zingafumaneka eNamibia, eBotswana, eZimbabwe, eMocambique, eSouth Africa naseSwazini.
Zixhaswa ziintlobo ezinkulu ze-zikhova, ezithathwe yinyoka, iinkonzo, kunye namajethi. Isongelo esisisiseko kwi-bushbaby encinane ngumlilo. Ezi zilwanyana azikwazi ukuhamba umgama omde kwaye zijongene nemiphumo emibi xa umlilo uphawula kwindawo yazo njengoko oku kunokutshabalalisa ukutya kwazo okukhoyo kwiindawo abahlala kuzo. Oku kunokukunceda uchaza ukuba kutheni zifumaneka kwiindawo zokuhlala zengca ezinomdaka kunye nezimfutshane, uhlobo lokukhusela emlilweni.
Iintlanga ezininzi zaseAfrika zikholelwa ekukholweni ngale ndlela-izandi zayo ezihlekayo, ezivakalayo zithi zibangelwa yinyoka enkulu engavakaliyo enentloko, eguqulwe ngemibala ebomvu, ebulala abantu ababi ngokubethelela intloko embi entloko!